Haddii aad tahay qof qaba telefoonka ah Android iyo qoraalka badan, oo ah tababaraha SMS Android waa lagama maarmaan kuu ah. Waxaa yimaado anfacaya ee soo socda saddex xaaladaha:
* Waxaad leedahay qaar ka mid ah farriimo muhiim ah in aad si qalad ah aan doonaynin in ay tirtirto ama lumiso iyaga, si aad rabto in aad dib ilaa SMS si computer diiwaanada mustaqbalka.
* Waxaad doonaysaa in aad ku qor baxay fariimaha adigoo isticmaalaya keyboard iyo u diro ka PC in ay xiriirada hal ama dhowr ah.
* Messages in aad mailkooda bilaabi bararin oo aad jeclaan lahayd in ay tirtirto fariimaha deg deg ah oo ku haboon.
Wax kasta oo xaaladda aad ee waxaa laga yaabaa, waxa ugu muhiimsan ee aad daryeeli ku saabsan waa in uu noqdaa nooca Tababaraha SMS ah ee Android kugu habboon. Halkan, waxaan doonayaa inaan idin tusin software cabsi badan iyo barnaamijyadooda si ay u maareeyaan SMS si aad rafcaanka oo ku habboon.
Qaybta 1. Best 3 Software in aad Maamul SMS Android on PC Effortlessly Qaybta 2. Top 7 Apps Manager SMS ah ee Android
Qaybta 1. Best 3 Software in aad Maamul SMS Android on PC Effortlessly
Hal-dukaan Tababaraha Android SMS in Eebe idin badbaadiyo, soo dir, tirtirto iyo aragtida SMS - sida neecaw.
Si toos ah dir farriimaha SMS ka computer mid ama ka badan saaxiibo.
Dhoofiyo oo dhan ama dunta SMS loo doortay in ay computer ka iyo badbaadiyey sida TXT file / XML.
SMS laga keeno ee file XML in aad dhoofiyo la MobileGo u soo celinta.
Dooro thread SMS wax basaasa farriimaha faahfaahsan oo ku haboon.
Gacanta ka phone call oo fariin u dirayaa sidii a reply marka aad mashquul tahay.
La wadaag barnaamijyadooda aad jeceshahay saaxiibadaa, qoysaska SMS.
Delete badan SMS aan loo baahnayn iyo threads mar oo bilaash ah ilaa mailkooda ah.
Fiiro gaar ah: The version Mac ma ha ma aad gacanta off phone call.
Feature 1. Send iyo Reply SMS ka Computer si toos ah
Too u gaabiyaa nooca iyo soo diro fariimo shaashad yar oo Android phone? Haddii aadan haysan in. Wondershare MobileGo for Android Awood aad si toos ah fariin ka helay computer ku soo diri haboon. Intaa waxaa dheer, waxaa la, aanad haysan si ay u qor oo fariin la mid ah u soo dir saaxiibo badan. Halkii, waxaad la qoraalka kartaa dhammaan saaxiibada gobal hal fariin ah. Ka sokow, waxaa xitaa aad u saamaxaaya in ay gacanta off wicitaan oo taleefan ah, oo fariin u soo diri sida a reply. Tani waxay arrin kuu haboon marka aad aad u mashquul inuu ka jawaabo wicitaan oo taleefan ah tahay.
In galeeysid bidix ee suuqa hoose, guji SMS . Riix New . Wada hadal A baxa. Guji ka icon cross in ay doortaan dadka aad rabto in baaq loo diro. Markaas, riix OK . Nooca fariimaha ka dibna riix dir .
Feature 2. Save Android SMS Messages in Computer ah
Ma doonaysaa in fariimaha SMS muhiim gurmad dhacdo in aad ula kac ahayn iyaga laga yaabo in ay tirtirto? Way fududahay in la qaban. Tag galeeysid ka tegey oo guji SM S. Dooro threads SMS aad rabto in aad gurmad ah. Riix Import / Dhoofinta > dhoofinta SMS oo dhan si ay u computer ama dhoofinta xulay SMS si computer . In file computer suuqa kala pop-up browser, guji Save sida nooca . In liiska hoos-hoos u, dooro nooca ah - file XML ama file TXT. Markaas, guji Save si loo badbaadiyo SMS ka Android phone in computer.
Maalin maalmaha ka mid ah marka aad badiyay SMS ama marka aad telefoon cusub Android, aad dajiyaan karaa file XML idin ​​korinay oona la MobileGo ah. Riix Import / Dhoofinta > SMS Import ka computer . Dul galka kombiyuutarka meesha file XML la badbaadiyey. Markaas, guji Open si ay u dajiyaan.
Feature 3. Delete SMS Multiple ka Android Phone
Mailkooda aad SMS waxaa ka buuxda, oo aan laydinka soo dhowayn karaan SMS mar dambe? Waa wakhti ay ku tirtirto fariin SMS iyo SMS threads aan la rabin. By gujinaya SMS , waxaad geli suuqa kala maamulka SMS ah.
Delete oo gogo 'oo farriimaha ee dunta oo kale: View xubnihii farriimaha iyo tirtirto kuwa aad la rabin.
Delete threads SMS Android: Sax threads ku aadan doonayn in aad mar dambe sii. Markaas, guji Delete . In wada hadal pop-up ah, guji Haa .
Daawo Video ku saabsan Tani Manager Android SMS
Mobogenie waa Android software kale Tababaraha SMS desktop. Waxa aad siisaa awood ay uga dhoofsadaan iyo dhoofinta fariimaha Android inay / ka file CSV ah, tirtirto fariimaha oo aadan rabin in ay sii mar dambe. Ka sokow, waxay kuu ogolaanaysaa in aad si toos ah nooca fariimaha iyo diraan farriimaha ka PC dadka kale. Fiiri fiican, sax? Si kastaba ha ahaatee, waxaa weli ayna duleella qaar ka mid ah. Its interface ma aha nidaamsan ama fudud. Mararka qaarkood, fariimo ah in qaab CSV ku guuldareystaan ​​inay la soo dhoofiyo.
Baro wax badan oo ku saabsan Mobogenie >>
Marka loo eego Tababaraha laba SMS ah ee Android kor ku xusan, Moborobo uu leeyahay muuqaal fiican. Taas waxaa weeyaan, ayaa ah iyo qabyo-qoraalka ama folder la aqrin dhisay-in si loo badbaadiyo SMS aad akhriyin ama idinku soo diro. Ka sokow, MoboRobo sidoo kale awood u aad si ay u gudbiyaan SMS iyo ka phone Android, cid dir oo soo SMS ka computer ka soo jawaabin, iyo sidoo kale tirtirto threads SMS rabin aad.
Baro wax badan oo ku saabsan MoboRobo >>
Qaybta 2. Top Apps Manager 7 SMS ah ee Android
Textra SMS 4.5 / 5 Free
Kaabta SMS + 4.5 / 5 Free
Go SMS Pro 4.4 / 5 Lacag
Handcent SMS 4.4 / 5 Free
chomp SMS 4.3 / 5 Free
Tababare SMS 4.2 / 5 Free
Tababare SMS + kaabta 3.9 / 5 Free
Sida SMS chomp, SMS Textra sidoo kale kuu ogolaanaysaa inaad qoraalka hab qurux badan oo siman. Waxay leedahay 800+ emojis, GIFs aamusnaan ah, emojis dhaceen iyo sidoo kale mawduuc madow hab. Sidaa daraadeed, waxaad ku diri kartaa oo jawaabin qoraalka, xitaa qoraallada koox si deg deg ah. Ka sokow, waxa kuu ogolaanayaa inaad u astaysto kasta xiriir, sida saxiixyada, wararka bixinta, midabada xumbo, dhawaaqa, nidaamyada gariiraan, ogeysiisyada iyo in ka badan.
Download Textra SMS ka Google Play Store >>
2. SMS kaabta +
Sida ay magaceeda soo jeedisay, SMS, kaabta + waxaa inta badan loo isticmaalaa si ay kuu caawiyaan gurmad SMS, MMS oo wac Guda in account Google. Just ka jaftaa app this telefoonka aad Android oo saxiix in aad xisaabta Google. On shaashadda, akhriso talooyin ku shaashadda in la shakhsiyeeyo xeerarka aad rabto, sida waxa si gurmad (SMS, MMS Guda wac,), SMS calaamadinayo in ay yihiin akhrin, warbixinta baadi shil, iyo in ka badan. Markaas, kaabta tuubada in gurmad SMS ama tuubada Soo Celinta si loo soo celiyo SMS dib u telefoonka aad Android.
Go SMS Pro waa Manager SMS looga cabsado, waayo, app Android. Waxaa jira in ka badan 200 oo mawduuc qurux badan iyo in ka badan 800 oo emoticons, si aynu aad qoraal in xaalad raaxo iyo farxad. Waxaa kuu saamaxayaa inaad qoraal SMS and MMS for free, iyo si deg deg ah jawaab celin. Iyadoo version pro, aad qabto astaamaha more socodyada, aad ku raaxaysan kartaa sanduuqa sare ee gaarka loo leeyahay u Unlock tilmaam, laga galo qarsoon iyo wargelin in isbeddel, gaashaan Farriinta maalgaliyo oo ay bannaan ee aan xad lahayn in uu kaydiyo aad SMS.
Download Go SMS Pro ka Google Play Store >>
Handcent waa app Fariin caan ah Android inay sameeyaan fariimo midabo. Waxaa u hagaagsan karaa sawir profile ka Facebook u xiriirada, ilaa iyo inta ay ciyaarta magacyada, dhigay ogeysiis gaar ah, qaab, diro goobaha qof gaar ah oo aad u. Ka sokow, waxay ku siinaysaa badan oo mawduucyada iyo daruuraha, taas oo ka dhigaysa fariimo midabo. Intaa waxaa dheer, waxa ay u ogolaanaysaa fariimaha aad gurmad aad qoraalka iyo MMS iyo goobaha in daruurtii oo ka dib loo soo celiyo. Laakiin taageerto kor u farriimaha si daruurta ahaa kama uu yahay lacag la'aan ah, in aad bixiso waxa loogu talagalay. Haddii aad qabtid qaar ka mid ah fariimaha oo aad rabto inaad sii qarsoodi ah, waxaad isticmaali kartaa sanduuq ay gaarka ah si ay u qariyaan.
Download Handcent SMS ka Google Play Store >>
chomp SMS si fiican u shaqeeyaa oo kuu ogolaanaysaa inaad astaysto wax walba. Wuxuu ka kooban yahay in ka badan 800 oo emojis, fara badan mawduucyada, noocyada font, tirada font, wallpapers soo jeeda, LED midabo gaadhsiin, ringtones, nidaamyada gariiraan, noocyada font, si aad qoraalka noole iyo midabo. Waa maxay ka badan, kugu xiri karaan fariimaha gaarka ah in ay sii ammaan ka kalab ah, si deg deg ah jawaab celin fariin markii shaashadda telefoonka aad xiran yahay.
SMS chomp Download ka Google Play Store >>
Tababare 6. SMS
Tababare SMS waa Android app ah tababaraha SMS oo bilaash ah. Waxay kaa caawinaysaa in ay gurmad iyo soo celinta fariimaha qoraalka ah aad si fudud, shaandhayso fariimaha qoraalka ah via lambarka taleefanka, mailkooda iyo xiriirada, iyo dhaqaaqo fariimaha qoraalka ah ka default Android mailkooda si ay mailkooda. Ka sokow, uma baahnid inaad wax laga walwalo qoraalka fariin kalab ah, sida ay qarin karaan fariin qoraal in aan raad kasta. Waa maxay dheeraad ah, waxaa disables gaadhsiin SMS, taas oo aad xoreeyaan la jeedin. Si kastaba ha ahaatee, waa in aynan Android 4.4 ama wax ka sareeya.
Download Manager SMS ka Google Play Store >>
7. SMS Manager + kaabta
Tani Tababaraha SMS yar + app ee kaabta aad bixisaa hab quruxsan fudud si ay u helaan mailkooda SMS aad. By isticmaalkiisa, aad awoodaan in ay si fudud u gurmad oo dhan SMS si file XML ah, iyo soo celinta ka file XML ah. Marka aad ka fekerto in SMS bilaabo bararin doonaan in mailkooda ah, waxaad tirtiri kartaa kuwa aan la rabin oo bilaash ah ilaa meel. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay dhab ahaantii app fudud in aad u fudud in ay mailkooda SMS helaan. Haddii aad rabto in ka badan, waxaad si fiican u eegi lahaa wax kale.
Download Manager SMS + kaabta ka Google Play Store >>
Kaabta Android App iyo App Data
Sidee si ay u gudbiyaan iyo Guba Android Video inay DVD
Sida loo wadaag Google Music Google+
> Resource > Android > Top 10 Maareeyayaasha SMS Android Waayo, waxaad